Shiinaha Silicone Coins Boorsada & Silicone bacaha warshad iyo soosaarayaasha | SJJ
Qadaadiicda iyo qalabka kale ayaa muhiim ah laakiin ma sahlana in la helo, oo ma nadiifsana in si toos ah loogu rido boorsooyinkaaga, qaar ayaa ku dhaawacmi doona ama xoqan si laysugu daro.
Qadaadiicda iyo qalabka kale ayaa muhiim ah laakiin ma sahlana in la helo, oo ma nadiifsana in si toos ah loogu rido boorsooyinkaaga, qaar ayaa ku dhaawacmi doona ama xoqan si laysugu daro. Thekiisaska qadaadiicda silikooncabbir yar iyo qaabab qurux badan oo kala duwan ayaa ah waxyaabaha aad u xalliso dhibaatooyinka. Waxaa lagu sameeyay alaab silikoon ah oo tayo sare leh iyo jiinyeer jiinyeer ah ama xiritaanka biraha, waxay si gooni gooni ah u hayn karaan qadaadiicda iyo agabka. Si kiisaska looga dhigo cabbir weyn sida boorsada gacanta, waa boorsooyinka silikoonka ah oo si habboon loogu isticmaalo nolol maalmeedkaaga. Midabada asalka ah iyo midabada summadaha qurxoon waxay la jaanqaadi karaan midabada PMS iyadoo loo eegayo baahida macmiilka, waxayna xayeysiiyaan fikradaha iyo fikradaha lacag ururiyaha. Kiisaska lacagta birta ah ee silikooniga ah iyo bacaha silikoonku waa xoog badan yihiin, waaraan oo ku filan in la isticmaalo muddo dheer. Waxay yihiin kuwo u adkaysta biyaha sidaa darteed waxaa loo isticmaali karaa cimilada roobka, si looga fogaado baabuurtaada, gurigaaga iyo meelaha kale inay qoyaan. Bacaha silikoonku waa kuwo ku habboon deegaanka iyo bay'ada si ay uga gudbaan heerarka imtixaanka Mareykanka ama Yurub, sidaa darteed waxaa loo adeegsan karaa qaadista raashinka iyo waxyaabaha udgoon.
Naqshado: 2D, Logo -yada 3D ee dibedda, qaabab waa la beddeli karaa
Cabbirka: In ka yar 100 mm, ama la habeeyay
Midabada: Waxay la jaan qaadi kartaa midabada PMS, ama raac shuruudahaaga.
Lifaaq: Xiritaanka birta, Faraantiyada boodka, Furayaasha, furayaasha furaashka, jillaabyada ama raac
Hore: Silsilado Keychains
Xiga: Daboolida Daboolka Silicone Cup
Boorsada Qadaadiicda ah
Keychain Lacag Qadaadiic ah
Bacaha silikooniga ah
Boorsada Lacagta Silicone Cartoon Coin
kiisaska qadaadiicda silikoon
Kiishka Silicone Coin
Boorsada Silicone Cute Coin
Hanger Bag & Finder Fure